Umenzi wentsimbi wase China uMvelisi kunye noMthengisi | Mestech
Uyilo kunye neeprototypes
Iprototype yentsimbi ihlala isenzelwa iinjineli ukuba zingqinisise uyilo lwesixhobo okanye umatshini. IMestech ibonelela ngokuveliswa kwesinyithi prototype yabathengi.
Umzobo wentsimbiihlala isenzelwa iinjineli ukuqinisekisa uyilo lwesixhobo okanye umatshini. IMestech ibonelela ngokuveliswa kwesinyithi prototype yabathengi.
Amalungu esinyithi ahlala esetyenziselwa ukwenza iinxalenye ezichanekileyo kunye nezixhobo zeqokobhe, kwaye zibiza kakhulu kunezo zeplastiki. Ukuphucula uyilo kunye nokunciphisa umngcipheko, kufuneka wenze iisampulu zohlobo loyilo kunye nenkqubo yokuqinisekisa ngaphambi kwemveliso esesikweni.
Amalungu esinyithi asetyenziswa ngokubanzi koomatshini ohlukeneyo nakwizixhobo. Zihlala zisetyenziselwa ukwenza iinxalenye ezichanekileyo ngenxa yokuzinza kwazo, amandla kunye nobulukhuni, iimpawu ezinobushushu obuphezulu kunye nezisezantsi kunye nokuqhutywa kombane, eziphakamileyo kakhulu kuneplastiki.
Xa kuthelekiswa namalungu eplastiki, kukho iintlobo ezininzi zezinto zeengxenye zensimbi, ezifana ne-aluminium alloy, i-alloy alloy, i-zinc alloy, isinyithi, i-titanium alloy, i-magnesium alloy njalo njalo, kunye neepropati ezahlukeneyo. Phakathi kwazo, ii-ferroalloys, i-aluminium alloys, i-alloys zethusi kunye ne-zinc alloys zihlala zisetyenziswa kwimveliso zorhwebo nakwimveliso yoluntu. Ezi zinto zesinyithi zineempawu ezahlukileyo zomzimba kunye neekhemikhali, kwaye itekhnoloji yokuqhubekeka yamalungu esinyithi anezakhiwo ezahlukeneyo kunye neemilo yahluke kakhulu.
Ngokwemathiriyeli kunye nolwakhiwo lwamalungu, zininzi iintlobo zemveliso ezenziwa ngobuninzi beenxalenye zentsimbi, ezinje ngokusika, ukulahla ukutya, ukungafihli, ukuthoba, ukugoba, ukuphuma kunye nokuntywila. Ukufa-ukulahlwa, ukungabinanto, ukukhutshwa kunye nokuntywila, izinto zokubumba zisetyenziswa. Ngokuqhelekileyo isikhunta sithetha ukutyala iindleko eziphezulu, ukusika ngoomatshini kusetyenziswa ngokubanzi ekwenzeni kwabo izinto.
Zintathu iinkqubo eziphambili zokwenza isampulu yentsimbi:
Ikakhulu esetyenziselwa iindawo ngokuchaneka mbono eliphezulu kunye namalungu amancinane.
Esona sixhobo siphambili ngumatshini wokugaya we-CNC, i-lathe, i-grinder, i-EDM, i-WEDM kunye nezinye izixhobo zomatshini.
Ukulungiswa kweenqwelomoya, umphezulu, indawo kunye nomngxunya we-asi, umkhono, idiski, i-cuboid kunye nendawo yentsimbi egobile.
Izixhobo umatshini ngqo ngqo zisetyenziselwa ukuqhubekekisa iinxalenye kunye neemfuno ngqo eliphezulu. Icandelo ezinje ngegiya, izikrufu, njl.
Ukulungiswa kwesinyithi sephepha
Kwigobolondo kunye nokugubungela iisampulu ngodonga olucekeceke kunye nobukhulu obufanayo kuyo yonke indawo, inkqubo yentsimbi isetyenziswa ngokubanzi, oko kukuthi, kusetyenziswa umatshini wokusika we-laser kunye nezinye izinto ezilula okanye izixhobo ngokugoba, ukusika, ukunyathela kunye nokubethelela. Kuxhomekeka ikakhulu kwimveliso yesandla.
Umzekelo, indawo yokuhlala imoto, i-chassis yekhompyuter, njl.
3. Umphezulu Emva konyango
Emva koomatshini okanye ukuqhubekeka kwesinyithi, ubukhulu bokuyilwa kunye neemilo ziyafunyanwa. Ukufumana umgangatho wobuso obuhle kunye nenkangeleko, unyango lomphezulu luyafuneka rhoqo.
A. umphezulu ukugqiba: besila, ipolishi, texturing, laser nangokukrola embossing.
B. Ukutshiza ngomgubo, ukwenza i-electroplating, ioksijini kunye nokupeyinta.
I-Aluminium ye-CNC yeeprototypes
Precision ngomatshini sentsimbi prototype
AMAGQABAZA Stainless ngentsimbi engenazingcingo
Ubunzima obuphezulu, amanqaku aphezulu obushushu obunyibilikayo kunye neemfuno zokuchaneka okuphezulu kwezinto zentsimbi zichonga ubuchwephesha bokuqhubekeka kwabo bohlukile kobo bezinto ezingezizo zesinyithi (ezinjengeeplastikhi) ekwenzeni iiprototypes okanye iisampulu. Inkampani yethu ibonelela abathengi ngoluhlu olupheleleyo lwe-one-stop prototype okanye imveliso yokuvelisa kunye nenkonzo, kubandakanya iinxalenye zeplastiki, iinxalenye ze-silica gel, iinxalenye zesinyithi njalo njalo. Ukuba uyayifuna, nceda unxibelelane nathi.
Egqithileyo Faka ukubumba
Okulandelayo: Umngundo weplastiki kumatshini wokususa iinwele
Umatshini wokuprinta we-3d wensimbi
Metal Machining Prototype
Icandelo lokunyathela i-Metal Stampot
IPrototype Sheet Metal Parts
Ushicilelo lwe-3D lwentsimbi